Waa maxay tijaabada muraayadaha samaynta? Tijaabiye alamarka ah? Aqoonsi muraayad ah?
Ma jiraan wax tijaabin ah oo lagu kalsoon yahay ee dhagxaanta. Waxaa jira daraasiin maabaal ah, laakiin waxay yihiin run ahaantii tijaabiyeyaasha adag, taas oo aan cadeynin xaqiiqada dhagax.
Nasiib darro, tani waa mid ka mid ah qalabka ugu badan ee loo isticmaalo maraakiibta iibiya.
Haddii aad eegto sawirka waxaad arki doontaa taliye leh lambarro ka bilaabanaya bidix ilaa midig 1, 2, 3, 4, 5….
Iftiinnada iftiinka marka aad taabatid dusha sare ee dhagaxa. Waxaad arki kartaa lambarka u dhigma dhagaxa adag ee dhagaxa.
Macluumaadkani waa sax. Tani waa miisaanka adag, oo loo yaqaan miisaanka Mohs
Tusaalooyinka Mohs waa qiyaas adag
5 - Apatite-ka
10 - Dheeman
Heerka Mohs ee adag ee macdanta ayaa ku saleysan awoodda hal tusaale oo macdanta ah. Shay-baarku ay isticmaalaan Mohs waa dhammaan macdanta kala duwan. Macdanta dabiiciga ah ee laga helo dabiiciga waa qashiraad adag oo adag. Sidoo kale hal ama in ka badan oo macdan ah ayaa dhagxaan. Maaddaama ay tahay walaxda dabiiciga ah ee ugu caansan, markii uu Mohs abuuray miisaanka, dheemanadu waxay ku yaalaan xagga sare ee miisaanka. Dhibaatada qalabka waxaa lagu qiyaasaa miisaanka adoo helaya waxyaabaha ugu adag dhagaxa, marka la barbardhigo qalabka jilicsan adigoo xoqaya maaddada. Tusaale ahaan, haddii maaddooyinka qaarkood ay xoqin karaan caajisnimada laakiin aysan ku jirin fluorit, adagaanta miisaanka Mohs ayaa ku dhici doona 4 iyo 5.
Dhibaatada dhagaxda waxaa sabab u ah ka kooban kiimikada
Tan iyo dhagax dhejis ah oo leh walxo kiimiko ah oo la mid ah dhagax dabiici ah, qalabkani wuxuu ku tusi doonaa natiijo isku mid ah dhagax dabiici ah ama dhagxan.
Sidaa darteed, dheeman dabiici ah ama dabiici ah ayaa ku tusi doona 10. Ruby dabiici ah ama dabiici ah ayaa sidoo kale ku tusi doona 9. Isku mid ah safayr dabiici ah ama dabiici ah: 9. Sidoo kale quartz dabiici ah ama dabiici ah: 7…